Snohomish PUD Breaks Ground on Microgrid iyo Xarunta Teknolojiyadda Nadiifinta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Snohomish PUD Breaks Ground on Microgrid iyo Xarunta Teknolojiyada Tamarta Nadiifka ah
Congressman Rick Larsen (LR) waxaa ku weheliya martida oo ay ka mid yihiin Gudoomiyaha PUD Sid Logan, Khabiirka Siyaasada Tamarta Ganacsiga Bob Kirchmeier iyo Kaaliyaha Guud ee PUD Tom DeBoer oo gogosha ka jaraya Xarunta Snohomish PUD ee Arlington Microgrid iyo Xarunta Teknolojiyada Nadiifinta.
Mashruucani wuxuu matalayaa tikniyoolajiyad cusub iyo qaab bixiya adkeysi shabakadeed iyo is-dhexgal tamarta la cusboonaysiin karo. Mashruucu wuxuu ka koobnaan doonaa 500-kilowatt oo qorraxda leh oo leh rogayaal caqli-gal ah, 1,000 kW / 1,000 kWh lithium-ion nidaamka keydinta batroolka iyo dhowr xarumood oo lagu xareeyo gawaarida-ilaa-shabakadda si loogu isticmaalo gawaarida korantada ee PUD.
Deeqaha laga helo Barnaamijka Casriyeynta Qalabka Casriyeynta ee Washington Nadiifinta Tamarta Nadiifinta ayaa gacan ka gaysatay bixinta tamarta walxaha kaydiya taas oo awood u siinaysa kuwaan iyo kuwa kale ee xiisaha leh ee muujinta microgrid-ka. Cilmi-baarista Microgrid, horumarinta iyo muujinta adeegyadayada gaarka loo leeyahay ee dadweynaha ayaa waddo u xaaraysa nidaamyo awood bulshada oo jilicsan oo adkaysi leh.
Akhriso war-saxaafadeed buuxa.
sanduuqa tamarta nadiifka ahTiknoolajiyad nadiif ahdeeqokaabayaashaXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Xarunta Shirarka Isugeynta waxay keeneysaa $ 93 milyan oo Horumarineed Bulshada ah, oo ay kujirto $ 30 milyan oo loogu talagalay Guriyeyn Laqaban Karo Shirka Maamulka Agaasinka Suuq-geynta Dalxiiska ee Gobolka oo loo qorsheeyay Agoosto 30 Xarunta Shirarka ee Madaarka SeaTac →